आधा होइन, साझा संविधान | Bridge to Nepal and Nepali
८० प्रतिशत सहमति भइसक्यो भन्दाभन्दै पहिलो संविधानसभा मारियो। अहिले संविधानसभामा पुगेका सबै दलको एउटै श्वर छ: एकवर्षभित्रमा संविधान जारी हुनेछ। यस्तै होस्, यो श्वर स्याल हुइया नबनोस्। संविधानका अन्तरवस्तुमा छलफल सुरु भएकै छैन। संविधान लेखन गरेर जनस्तरमा छलफलका लागि ल्याउनु पर्छ र देखिएका प्रतिक्रियाहलाई समेत संविधानमा संवोधन गरेर संविधान जारी गर्ने हो। आशंका छ, विदेशतिर संविधान लेखिदैछ, त्यो संविधान नेपालमा ल्याएर सभासदहरुले सही ठोक्ने र सभामुखले पारित भयो भनेपछि संविधान बन्नेछ।
यस्ता आशंकाहरु प्रशस्त छन् र यी आशंकाहरुलाई पार्टीहरुले नै मलजल गर्दै आएका छन्। अहिले पार्टीहरु उच्चस्तरीय संयन्त्र, मेलमिलाप आयोग, २६ सभासद्को मनोनित, राजदूत नियुक्तिदेखि यस्तै यस्तै राज्यका अधिकार लिन र स्वार्थ पूरा गर्न आतूर देखिन्छन्। पहिलो संविधानसभाका सहमतिको स्वामित्व लिए पनि नमिलेका विषयमा मिलाउने प्रयत्नतिर नेताहरुको ध्यान पटक्कै गएको देखिदैन। अनि कसरी एकवर्षमा संविधान बन्छ भनेर जनतामा विश्वास देखिनु?
संविधान बन्नैपर्छ। अगेनो बाल्ने सुरसार देखिन्न, भान्छे बनेका नेताहरु भात पाक्छ भन्दैछन्, यही नै अविश्वासको कारण हो। नीति, नैतिकता, कर्तव्य र जिम्मेवारी यी प्रजातन्त्रका मूल्यहरु हुन्। यी मूल्यहरुमा पटक पटक चुक्दै आएका छन् नेताहरु। एकवर्ष भने पनि दुईचार महिना बढी लाग्दैमा केही फरक पर्दैन तर संविधान आउनुको बिकल्प छैन। सधैं संक्रमण र अन्तरिम भएर देश चलिरहन सक्दैन। देशमा राष्ट्रघातदेखि सामाजिक बिचलनहरु देखिएका छन्, कूशासन बढ्दै गएको छ, यो संविधानबिहीनताले हो। यसको जिम्मेवारी यिनै राजनीतिक दलहरु हुन्, जो ०६३ देखि चलाउँदै आएका छन्।
सडकमा नेकपा–माओवादीसहितका ३३ दल छन् र यसका नेताहरु आफू अन्य राजनीतिक दलहरुले पाउ सरहको अधिकारबाट बन्चित गरिएकाले निर्वाचनमा भाग नलिएको बताएको छ। संविधानसभाले आमसहमतिमा संविधान निर्माण भएमा आफूलाई स्वीकार हुनसक्ने संकेत हो यो। यसैगरेर पूर्वराजा पनि सहमतिको संविधान जारी गर्नुपर्ने धारणाहरु मौका मौकामा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। यसको अर्थ संविधानभित्र र बाहिर सहमतिको संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने सकारात्मक भावनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्।
यो एकवर्षमा संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने सरकार र सभासद्हरुका लागि सुवर्ण मौका हो। निषेध र बिभेदकारी भावनामा हामीमा छैन भन्ने उदारता प्रदर्शन गर्न सरकार र सभासद तैयार भए भने नेपालमा चमत्कार हुनजानेछ र सर्वसम्मत संविधान जारी हुनसक्छ। मात्र यो संविधानमा सबैले स्थान पाउने प्रत्याभूति दिन संविधानसभा तैयार हुनुपर्छ। अहिलेलाई नेकपा–माओवादी डढेलो सल्कने झिल्का हो, पूर्वराजा मौन छन्। यी नेपाली शक्ति हुन् भन्ने मानेर यिनको भावनाको कदर र मागको संवोधन संविधानमा हुनसक्यो भने संविधान जारी हुनसक्छ। हालैमात्र प्रचण्डले अन्तरवार्तामा भनेका छन्– ६ महिनामै संविधान जारी हुनसक्छ। हो, हुनसक्छ, संविधान जारी गर्न प्रचण्डले पहल कदमी लिने र अरुले साथ दिने हो भने यो सम्भव छ।
अर्को » टनकपुरबारे सुशीलको जवाफ खै? »
पहिलाको » कर्मचारीलाई कारबाही गर्न कानुन संशोधनको तयारी »